आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफैं गरौं ! - Rubas News
आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफैं गरौं !
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला १० दिनमा पीसीआर परीक्षणमै कोरोना संक्रमण सात गुणाले बढेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या अप्रिल ५ देखि ११ सम्म ४९ मात्रै थियो। बुधबारसम्म ३ सय ७० जना पुगेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक छ। निर्देशनालयकै तथ्यांकअनुसार चैत १७ गतेयता सीमा नाकाहरूमा एन्टिजेन परीक्षणबाट १ हजार ६८ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कोरोना फैलावट तीव्र भए पनि सतर्कता भने देखिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भीडभाड नर्गन र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे पनि कडाइका साथ पालना हुन सकेको छैन। ‘एन्टिजेन परीक्षणमा चारवटा नाकामा स्वास्थ्यकर्मी खटाएका छौं। बिरामी १०औं गुणा बढिरहेका छन्। अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि संक्रमित भएका छन्। आइसोलेसन सेन्टरहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ’, सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘यस्तो बेला पनि न्यून जनशक्तिमा हामी खटिएका छौं। घरको अवस्थाका बारेमा खासै अनुगमन हुन सकेको छैन। अब स्वयंले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हो।’
यो अवधिमा कैलाली र कञ्चनपुरसँग सीमाना जोडिएको गौरीफन्टा नाकामा सबैभन्दा बढी कोरोनाका बिरामी पुष्टि भएका छन्। यो नाकामा चैत ३ गते हेल्थ डेस्क राखेर एन्टिजेन परीक्षण सुरु भएको थियो। ‘गौरीफन्टा नाकामा भारतबाट फर्केर आएका ११ हजार ३ सय ६८ जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा ८ सय ५७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभिड स्रोत व्यक्ति नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा ३ हजार ८ सय ८६ जनाको परीक्षण गर्दा १ सय ८९, बैतडीको झुलाघाटमा ४ सय ९० जनाको परीक्षण गर्दा २१ र दार्चुलाको पुलघाटमा ४१ जनाको परीक्षण गर्दा एक जना गरी १ हजार ६८ जनामा कोरोना पोजेटीभ देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका अस्पतालमा ७५ जनाको उपचार भइरहेको छ। यी लक्षण देखिएका गम्भरी प्रकृतिका बिरामी हुन्। एन्टिजेन परीक्षण गरेर घरमा आइसोलेसन बस्न नसक्ने १ सय ७० जना विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा बसिरहेका छन्।
कैलालीमा चैत र वैशाखमा पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा पोजेटिभ आएकाहरूको संख्या १४ सयभन्दा बढी छ। पीसीआरमा पोजेटिभ आएका तर लक्षण नभएकालाई घरमै आइसोलेसन बस्न भनेर पठाइएको छ। नाकामा एन्टिजेन पोजेटिभ आएकाहरूलाई पहिलो पटक नजिकको आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गरिने र त्यसपछि बिरामीले आफैं गाडीको व्यवस्था गरे होम आइसोलेसन भनेर पठाउने गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ मा रहेको जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको भवनमा बनाइएको आइसोलेसनमा बिहीबारसम्म ३८ जना बसेका छन्। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल र आईसीएचको आइसोलेसनमा ५० जना आइसोलेसनमा छन्। यीबाहेक १३ सय जनालाई होम आइसोलेसनका लागि भनेर घर पठाइएको छ। तर, उनीहरूको अवस्था के छ ? घरमा कत्तिको स्वास्थ्यका मापदण्ड पुर्‍याइएको छ ? छिमेकमा निस्केको छ कि छैन ? उपचारको अवस्था के छ ? अस्पताल कसरी आउने ? कुन चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्ने ? स्थानीयमा संक्रमण हुने खतरा कत्तिको छ ? यसमा कुनै पनि निकायको ध्यानजान सकेको छैन।
Previousएम्बुलेन्सबाटै भागे कोरोना संक्रमित
Nextएमालेको स्थायी कमिटी घोषणा
११ वर्षिया छोरीलाई बुवाले गरे बलात्कार